Q ဝင်နေတုန်း လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့ ရှားမှ ရှားတဲ့ မြန်မာပြည်တော်ပြန်များ – White Sone
Q ဝင်နေတုန်း လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့ ရှားမှ ရှားတဲ့ မြန်မာပြည်တော်ပြန်များ
Q ဝင်နေတုန်း လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့ ရှားမှ ရှားတဲ့ မြန်မာပြည်တော်ပြန်များ..
ပူညံပူညံ အသံတချို့ကြားနေရလို့ စနည်းနာကြည့်လိုက်တြ့အခါ ပြန်တော်ပြန်တချို့နဲ့ FQ စင်တာက ဗော်လံတီယာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ စကားအခြေအတင် ပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန် တယောက်ပြောနေတာက မင်္ဂလာဒုံက သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာ ရိပ်သာလို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ကျမယ်ထင်လို့ FQ ကို ရွေးလိုက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို လှိုင်သာယာမှာ လာနေရတဲ့အတွက် အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ကွန်ပလိန်းတက်နေကြတာပါ။ တကယ်တော့ လှိုင်သာယာဟာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း လက်ခံလို့ရတဲ့ အခြေအနေပါ. သူတို့အဓိက ကြုံနေရတဲ့ အဆင်မပြေမှုကို ကျွန်တော်လည်း နားလည်လို့ ရပါတယ်။ အဓိက ပြဿနာက ကွာရန်တင်းစင်တာကို လုံလောက်တဲ့ သန့်ရှင်းရေး သေသေချာချာ လုပ်မပေးနိုင်တာပါပဲ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့က နေသွားတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဘယ်ကလာသူတွေဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် တချို့အခန်းတွေရဲ့ သန့်ရှင်းရေးက အခြေအနေအတော်ဆိုးပါတယ်။
ဒါ့အပြင်.. ပေးထားတဲ့ ထိုင်ခုံတွေက အခြေအနေ အတော်ဆိုးပါတယ်.. စိတ်ထင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဆောင်နေကျောင်းသူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ခုံတွေလို့ထင်ပါတယ်.. သံဖရိန်အထိုင်နဲ့ ဖိုင်ဘာခုံတွေဖြစ်ပေမယ့် အရည်အသွေးအလွန်ညံ့ဖျင်းတာမို့ ခုံအများစုဟာ နောက်မှီတွေမရှိတော့ပါဘူး… နောက်မှီအတော်များများဟာ ကွဲထွက်ပြီးပြုတ်ထွက်နေပါတယ်… ကျနော့်အခန်းက ခုံဆိုရင်လဲ နောက်မှီနဲ့ ထိုင်ခုံနေရာအကွေးမှာ အက်နေလို့ ကုတင်နဲ့မှီပြီးထိုင်ရပါတယ်.. အဲလိုထိုင်တဲ့အတွက် ကျနော်နေတဲ့ ၂ ပတ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ ကုလားထိုင်က နောက်မှီပြုတ်မထွက်ပဲ မူလအတိုင်း အက်ရာလေးနဲ့ ခြေရာလက်ရာမပျက် ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်… အစောပိုင်းက ပြောခဲ့ဖူးသလို သုံးရေချိုးရေမှာလဲ သန့်ရှင်းမှုမရှိပါဘူး… ဘေစင်ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းတွေကလဲ ပိတ်ဆို့ပြီး ရေကနည်းနည်းပဲထွက်ပါတယ်.. ရေချိုးခန်းတွေမှာလဲ ရေချိုးရမယ့် ရေပန်းခေါင်းတွေမရှိပဲ ဒီအတိုင်းပိုက်ကကျတဲ့ရေနဲ့ ချိုးကြရပါတယ်… မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ FQ ကိုရွေးချယ်မိတာ မှားပြီလားလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အထိ အဆင်မပြေမှုတချို့ရှိပါတယ်…
ဒါပေမယ့် .. ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေ ဆရာမတွေတောင် နေနိုင်သေးတာပဲ ကိုယ်ကဘာလို့မနေနိုင်ရမှာလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါ အတော်လေး စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပါတယ်… တကယ်တမ်းတော့ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းတဲ့ဖိုင်ဘာကုလားထိုင်တွေအပါအ၀င် အဆောင်ရဲ့ အဆောက်အဉီးမှာ အရည်အသွေးမမီတဲ့ကိစ္စတွေဟာ အစိုးရတာ၀န်ရှိသူတွေနဲ့ ကန်ထရိုက်တွေကြားက ဆီးသီးဗန်းမှောက်တဲ့ ကိစ္စတွေလို့ပဲမြင်မိပါတယ်.. ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကို သုံးပြီးအဆောင်တွေ ဆောက်ပေးထားပေမယ့် စေတနာမမှန်တဲ့ ကန်ထရိုက်နဲ့ အစိုးရတာ၀န်ရှိသူတွေကြောင့် အရည်အသွေးမမီတဲ့ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဉီးတွေမှာ မတတ်သာလို့နေကြရတဲ့ ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေကိုပဲ သနားမိပါတယ်…
မူလကကိစ္စကို ပြန်ကောက်ရရင် FQကွာရန်တင်းစင်တာမှာ နေထိုင်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် HQ ပြန်ပြောင်းချင်တဲ့အကြောင်း တချို့ပြည်တော်ပြန်တွေက တောင်းဆိုကြပါတယ်.. တာ၀န်ခံဆေးမှူးနဲ့ ဗော်လံတီယာတွေကလဲ သဘောကောင်းပါတယ်… အခက်အခဲတင်ပြမှုတွေအားလုံးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးပြီး အထက်အဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်တင်ပြပေးမယ်.. အထက်အဆင့်ဆင့်က လက်ခံခွင့်ပြုရင် HQ ပြန်ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြောပြီး ပြေလည်မှုရသွားကြပါတယ်… ညနေပိုင်းမှာတော့ HQ ပြောင်းချင်တဲ့လူတွေစာရင်းပေးပါ.. ပထမအကြိမ် ဆေးစစ်ပြီးတာနဲ့ရွှေ့ပေးပါ့မယ်လို့ ‌ကြေညာပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ ရောက်ပြီး ၂ ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဆေးစစ်ဖို့ နှာခေါင်းနဲ့ အာခေါင်တို့ဖတ် ယူပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးဌာနက တာဝန်ရှိသူ ဆရာမတယောက်က လိုအပ်တာတွေကို ပြောပြပြီး ပြည်တော်ပြန်အားလုံးအတွက် တခါသုံး Mask နဲ့ တခါသုံး ရာဘာလက်အိတ်တစုံစီကို ဝေပေးပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးဌာနကလာတဲ့အဖွဲ့က တကြိမ်မှာ ၂ ယောက်နှုန်းနဲ့ တန်းစီပြီး အာခေါင်နဲ့ နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့က တို့ဖတ်ယူခံရတဲ့လူတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ တို့ဖတ်ယူပြီးချိန်မှာ မျက်နှာက ပြုံးနေကြပေမယ့် မျက်ရည်လေးတွေ ဝဲနေကြပါတယ်။ နှာခေါင်းအတွင်းထဲက နှာနုနဲ့ အာခေါင်ထိပ်ဖျားနားထိ နားကြပ်တံလို အတံနဲ့ ထိုးပြီး ကလိခံရတဲ့အတွက် အလိုလို မျက်ရည်ဝဲကုန်ကြတာပါ။ ကျွန်တော့် အလှည့်ရောက်တဲ့အခါ ကြားဖူးနားဝ ရှိတဲ့အတိုင်း နှာခေါင်းကို နှိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်ကို ဟပြီး အသက်ရှုရတဲ့အတွက် နာကျင်မှုကို သိပ်မခံစားရပါဘူး။ နည်းနည်းတော့့ ခံရခက်တာပေါ့။
ဆေးစစ်ဖို့ အာခေါင်နဲ့ နှာခေါင်းတို့ဖတ် ယူပြီးချိန်မှာတော့ HQ ပြောင်းမယ့် အဖွဲ့တွေကို ဟိုတယ်ဆိ ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗော်လံတီယာအဖွဲ့ကပဲ တာဝန်ယူပြီး ဟိုတယ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးတာပါ။ နောက် ၁ ရက်ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်နေ့တွေမှာတော့ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ပြည်တော်ပြန်များဟာ အဆောင်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရေတိုင်ကီတွေကို သန့်ရှင်းရေး တက်လုပ်ကြပါတယ်။ လှိုင်သာယာရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ ရေအရည်အသွေးကြောင့် တိုင်ကီထဲမှာ စုနေတဲ့ အဝါရောင်အနည်တွေကို တတ်အားသရွေ့ ဆေးကြောပစ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဘေစင်ပိုက်ခေါင်းတွေနဲ့ ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေအားလုံးကို သန့်ရှင်းဆေးကြာပြီး မကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် ရေအရည်အသွေးကြောင့် ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ချေးညော်တွေကို သန့်ရှင်းပစ်ပြီး အိမ်သာတွေကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တော်ပြန်ထဲက အလှူရှင်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ရေပန်းခေါင်းမရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းတွေကို ရေပန်းခေါင်းတွေ ဝယ်တပ်ကြပါတယ်။ စရောက်တဲ့နေ့က အားလုံးကို စိတ်အားငယ်စေတဲ့ အပေါ်ထပ် လှေကားခွင် ခန်းမထဲက ပျက်နေတဲ့ မီးချောင်းတွေကို အသစ်ဝယ်ပြီး လဲလှယ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်နေရာလေးကို နေပျော်ဖွယ်ဖြစ်အောင် အများအားနဲ့ စု‌ပေါင်းဆောင်ရွက် ကြပါတယ်။
ဆေးစစ်မှု ရလဒ် ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ အားလုံး စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားကြပြီး စောစောကပြောသလို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ ပြုပြင်တာတွေ အပြင် အချင်းချင်း ချစ်ကြည်စွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြဖို့ ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ညနေပိုင်းခြင်းဝိုင်းလေးတွေလဲ ရှိလာပါတယ်။ ခြင်းခတ်တဲ့ နေရာကတော့ ပင်မလှေကားခွင်ရဲ့ အပေါ်ထပ် ခန်းမမှာပါ။ အဲဒီနေရာတခုပဲ ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် ရှိတာမို့ အဲဒီနေရာမှာပဲ လူစုပြီး ခြင်းခတ်ကြပါတယ်။ ညဦးပိုင်းတွေမှာတော့ အမျိုးသားများရဲ့ အပျော်တမ်း ဖဲဝိုင်းလေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ စရောက်စဥ် ကတည်းက ပေးထားတဲ့ တကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းတွေထဲက ကော်ဖီမစ်ထုတ်တွေနဲ့ ဆော့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညဖက်ပိုင်းမှာ နောက်ထပ် စိတ်အပန်းဖြေစရာ အစီအစဥ်ကတော့ ဂစ်တာဝိုင်းတွေပါ။ တဆောင်လုံးမှာ ဂစ်တာသုံးလက်လား မသိ ရှိတဲ့အတွက် လူငယ်တွေ တလှည့်စီ အစွမ်းပြကြပါတယ်။
ကွာရန်တင်းစင်တာမှာ နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း မနက်စာ နေ့လည်စာ နဲ့ ညစာတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်မှန်ရောက်ပါတယ်.. မနက်စာဆိုရင် မနက်ခပ်စောစော ရောက်လေ့ရှိပြီး အဲဒီအချိန်ဆိုရင် အတော်များများ အိပ်ယာတောင်မထကြသေးပါဘူး.. အစားအသောက်တွေကို အဝါရောင်မီနီဘတ်စ်နဲ့ နေ့စဉ်လာပို့တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှသိရတာက ကျနော်တို့ နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့ တနေ့သုံးနပ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပဲစီမံပြီး ဖောင်ကြီးကနေပို့တာလို့သိရပါတယ်.. ကျနော်မှတ်ထားမိသလောက် နေ့စဉ်ပို့နေတဲ့ မနက်စာဟာ ၂ ပတ်လုံးလုံး လုံး၀မထပ်ပါဘူး.. နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကလည်း ကျနော့်အတွက်တော့ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်..
ဆန်ကောင်းမှစားတတ်တဲ့ ကျနော်တောင်စားလို့ဖြစ်တဲ့ဆန်မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်စားရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေတာပါ.. ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေပါလိမ့်မယ်.. တကယ်တမ်းတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူအတွက်ကတော့ တော်ရုံအစားအသောက်နဲ့လဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျနော်ကတော့ နေ့စဉ် လာသမျှ အစားအသောက်ကို ပြည်သူကျွေးတဲ့ ထမင်းအဖြစ်မှတ်ယူပြီး အကြွင်းအကျန်မရှိအောင် ကြိုးစားပြီးကုန်အောင်စားပါတယ်.. စားတိုင်းလည်း အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေနဲ့ စေတနာရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ စေတနာနဲ့ ကျေးဇူးကို အာရုံပြုပြီးစားတာဖြစ်ပါတယ်…(နေ့စဉ်စားရတဲ့ အစားအသောက်တွေကို မှတ်သားထားတာရှိပေမယ့် ရေးမပြတော့ပါဘူး)
ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်တာအတွင်း အစိုးရက စီစဉ်ပေးတဲ့ အခမဲ့ အစားအသောက်အပြင် အခါအားလျှော်စွာ လာလှူဒါန်းတဲ့အလှူရှင်တွေကောင်းမှုကြောင့် တခြားသရေစာတွေလဲ စားရပါသေးတယ်.. တခါတရံ ပြည်တော်ပြန်အချင်းချင်း ဒါနပြုတဲ့ သရေစာတွေလဲရှိပါတယ်.. ဆိုတော့ကာ ကျနော့်အဖို့ကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ FQ ကွာရန်တင်း၀င်ရတာဟာ ကျောင်းသားဘ၀ အဆောင်နေရသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေတယ်ပြောရပါမယ်. တကယ်တမ်းတော့ ကျနော်တို့ ပဉ္စမအကြိမ် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ လိုက်ပါလာသူ ပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ သင်္ဘောသားတွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့တွေဟာ လေယာဉ်မစီးခင် ၄၈ နာရီအတွင်းမှာလဲ ဆေးတကြိမ်စစ်ဆေးပြီး နက်ဂတစ်အဖြေထွက်ပြီးသားလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်.. ဒါ့အပြင် အလုပ်သဘောသဘာ၀ကြောင့်လားမသိ ရောက်ရာအရပ်မှာ အဆင်ပြေသင့်တင့်အောင် နေနိုင်ကြသူတွေများတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီး ပြည်တော်ပြန်သူများနဲ့ ပြဿနာကြီးငယ်မရှိ အချင်းချင်းအဆင်ပြေပြေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ၂ ပတ်တာကာလမှာ ကိုယ်နေထိုင်ရာ ကို အဆင်ပြေအောင် နေပျော်အောင်ဖန်တီးပြီး ပျော်အောင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်…
မူလက ၂၁ ရက်ကွာရန်တင်း၀င်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် ပြောင်းလဲနေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် မူပြောင်းသွားတဲ့အတွက် ၂ ပတ်‌မြောက်တဲ့နေ့မှာ ကျနော်တို့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပါတယ်.. ၂ ပတ်နဲ့အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုတာမို့ ဒုတိယအကြိမ် ဆေးစစ်တာလဲမရှိတော့ပေမယ့် နေအိမ်ကွာရန်တင်း ၇ ရက်ကိုတော့ဂရုစိုက်ပြီးသေသေချာချာ စည်းကမ်းလိုက်နာကြဖို့ပဲ မှာပါတော့တယ်.. ၂ ပတ်နဲ့ အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာကို ၁ရက်အလို မနက်ပိုင်းမှာကပ်သိရပေမယ့် ကျနော်တို့ ပြည်တော်ပြန်များဟာ အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာပဲ အဆောင်တခုလုံးကို တတ်အားသရွေ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်.. ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွေကို ကြွေချေးချွတ်ဆေးတွေနဲ့ပါ သေသေချာချာ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောပေးခဲ့တဲ့အပြင် ကြမ်းပြင်တွေကိုလဲ သေသေချာချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးခဲ့ပါတယ်.. အဆောင်အတွင်းပိုင်း အောက်ဖက်က မြက်ပင်တွေကိုလဲ ရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်…
ကျနော် အချုပ်ပြောလိုတာကတော့ အဆင်ပြေမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေဆိုတာက နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်.. ကျနော်တို့ နေထိုင်ရတဲ့ FQ စင်တာမှာလဲ မပြည့်စုံမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေရှိပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာ ဆိုးဆိုးရွားရွားမရှိပါဘူး.. ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတဲ့ လူတွေကလည်း တာ၀န်ရှိသူ ကျန်းမာရေးဌာန၀န်ထမ်းနဲ့ ဗော်လံတီယာအဖွဲ့တွေကို တိုက်ရိုက်အရေးဆိုညှိနှိုင်းတဲ့အတွက် သူတို့သွားလိုတဲ့ HQ ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရသွားကြပါတယ်.. ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ အဖက်ဖက်က အားနည်းမှုတွေရှိတဲ့ မပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တာမို့ အခုလို တကမ္ဘာလုံး သူ့ ကိုယ်မကယ်နိုင် ကိုယ့်သူမကယ်နိုင်အခြေအနေမျိုးမှာ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ ပူးပေါင်းညီညွတ်တဲ့အားနဲ့ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလိုအချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူတွေဟာ လူတယောက်ချင်းတဦးချင်းစီကို ဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်သလို မနိုင်မနင်းအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ လစ်ဟာမှုတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်.. ဒါတွေကို ကျနော်တို့က နားလည်‌ပေးပြီး အခက်အခဲတွေကို အတူတူစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကျော်လွှားရမှာပါ.. အရေးအကြီးဆုံးက ရှေ့တန်းက တိုက်ပွဲ၀င်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေ.. ဗော်လံတီယာတွေ.. နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့ အလှူရှင်တွေ စေတနာရှင်တွေကို ပါ၀င်အားဖြည့်နိုင်ရင် ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ပါပဲ.. လူအား ငွေအားနဲ့ မကူညီနိုင်ရင်တောင် အပြစ်မြင်တဲ့စိတ်လေးတွေလျှော့ပြီး တိတ်တိတ်လေးနေပြီး ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို မကူးစက်အောင် စည်းကမ်းတကျ နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်လဲ ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
(ဓာတ်ပုံတချို့ကို Tuntun Naing ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေယူသုံးပါတယ်)
Ko Shwe Mung
နေပြည်တော်ခုတင် (၁၀၀၀) ဆေးရုံသို့ သေဆုံးပြီး ရောက်ရှိလာသည့် ဒုချုပ်တဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့
ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာနဲ့ တအိမ်တည်းနေတဲ့သူကို Q ဝင်ဖို့လာခေါ်တာ မလိုက်နိုင်ပါဘူးတဲ့